IKazakhstan Ivalele AmaNgqina KaYehova Entolongweni Ngenxa Yokholo Lwawo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiYoruba
Abanjelwe Ukholo Lwawo
NgoJanuwari 18, 2017, abameli beKazakhstan National Security Commission babamba uTeymur Akhmedov, oliNgqina likaYehova eAstana, bemtyhola ‘ngokuqhwaya udushe lonqulo nokuphakamisa unqulo lwakhe.’ UMnumzan’ Akhmedov, oneminyaka eyi-60 onethumba elophayo (ekukrokrelwa ukuba libangelwa ngumhlaza), wavalelwa waza wagcinwa kwindawo yokulinda ukuxoxa ityala eAstana. Ukuba ufunyanwa enetyala, uza kuhlala iminyaka emihlanu ukuya kwelishumi entolongweni.
Unobangela Wezityholo Zolwaphulo-Mthetho
Into ebangela UMnumzan’ uAkhmedov atyholwe ngokwaphul’ umthetho yincoko awayenayo ngo-2016 nabantu ababezenza ngathi banomdla kumaNgqina KaYehova. Ebudeni bezi ncoko zathatha iinyanga ezisixhenxe, wayesebenzisa iBhayibhile ukuphendula imibuzo kwimixholo eyahlukahlukeneyo ababethetha ngayo. Engayazi yena uMnumzan’ uAkhmedov, ezi ncoko zarekhodwa zaza zasetyenziswa nxamnye naye etyholwa ngokwaphula umthetho waseKazakhstan okwiGaba 174(2). Lo mthetho uyakwalela “ukuphembelela intiyo yonqulo” ebangela “kuthethwe kakubi ngabantu bezinye iinkonzo” kwaye awubuvumeli “nobuxoki obenza abantu benkonzo baziphakamise okanye bazijongele phantsi ngenxa nje yenkonzo abakuyo.”
Sekunjalo, uMnumzan’ uAkhmedov ume ngelithi akawophulanga loo mthetho. Endaweni yoko, uthi ukuthetha kwakhe ngokholo lwakhe kuyakhuselwa liGaba 18 no-19 leInternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), elivumela “ukuba abantu bacinge ngokukhululekileyo, babe nesazela esikhululekileyo, bakhonze ngokukhululekileyo kwaye bathethe ngokukhululekileyo.” Ngaphambili, Ikomiti yeUN Elwela Amalungelo Abantu, ejongene nokwaphulwa kweICCPR, yathetha ngendlela iKazakhstan “ekuchaza ngayo ukwaphula umthetho” isithi ilisebenzisa kakubi iGaba 174 kubantu abazikhonzela ngokukhululekileyo. Kwingxelo yangoAgasti 9, 2016, le Komiti yacela iKazakhstan ukuba “ivumele abantu bakhonze ngokukhululekileyo kwaye benze nantoni na evumelana nokholo lwabo. Ifanele icinge ngokusebenzisa iGaba 22 elikumgaqo siseko ngendlela evumelana nesiBhambathiso ize ilungise yonke imithetho enento yokwenza neli Gaba, isuse imiqathango engahambisaniyo neGaba 18 lesiBhambathiso.”
Ngokuphathelele indlela iKazakhstan “ekuchaza ngayo ukwaphula umthetho,” kwingxelo yango-2014, uMnumzan’ uHeiner Bielefeldt, Owayesakuba Ngumphandi Okhethekileyo We-UN kwizinto zonqulo ucebisa ukuba iKazakhstan ikuchaze ngendlela ecacileyo oko “kuthethwa kukwaphula umthetho.” Ukuba ayikwenzi oko, loo mthetho “uza kuba nefuthe elibi kwinkululeko yonqulo.”
Ukuvalelwa Okungafanelekanga KukaTeymur Akhmedov
NgoJanuwari 20, 2017, Inkundla YeNgingqi Yesibini YaseSaryarka eAstana yagweba uMnumzan’ uAkhmedov ukuba ahlale iinyanga ezimbini entolongweni elinde ukuxoxwa kwetyala lakhe. Wabethwa ngabasemagunyeni bemnyanzela ukuba avume ukuba unetyala. Kuyo yonke loo nto, impilo yakhe inkenenkene kwaye kunzima nokuhamba. Amagqwetha akhe afaka izimangalo ekunye neqela leUN elijongene nokuvalelwa kwabantu ngokungafanelekanga, kunye nabaphandi abakhethekileyo beUN kwizinto zonqulo namalungelo enkululeko yokukhonza.
INkundla Yedolophu YaseAstana yasikhaba isicelo sokuba akhululwe ibe ayisamkelanga nesicelo sokuba achithwe amatyala akhe okwaphula umthetho. NgoMatshi 13, 2017, iOfisi Yomtshutshisi Wedolophu yagqithisela amatyala kaMnumzan’ uAkhmedov kwiNkundla Yengingqi Yesibini YaseSaryarka ukuze axoxwe khona. Xa belixoxwa ngoMatshi 27, 2017, ijaji izikhabile izicelo zommangali, kuquka neso sokuba avalelwe endlini endaweni yokuvalelwa entolongweni. Kuthwe inkundla iza kuphinda idibane ngoAprili 6.
Ingxelo Ngomntu Obanjelwe Isazela Sakhe
UTeymur Akhmedov, uneminyaka eyi-60, utshatile ibe unoonyana abathathu. Unesiphiwo sokucula, uhlonitshiwe ibe waziwa ngobubele ngabantu bendawo ahlala kuyo. Usisicaka solungiselelo ebandleni lakhe.
NgoJanuwari 18, 2017, iKazakhstan’s National Security Committee yabamba yaza yatyhola uTeymur Akhmedov ngokwaphula iGaba 174(2) lomthetho waseKazakhstan ongokwaphula umthetho. Ngendlela engafanelekanga, watyholwa “ngokuqhwaya udushe lonqulo nokuphakamisa unqulo lwakhe.” Usenokubanjwa iminyaka emihlanu ukuya kwelishumi.
Phezu kwayo nje impilo yakhe enkenenkene nezityholo zobuxoki, usaqhubeka enethemba lokuba le ngxaki iza kulungiseka.
Ukuze ubone uludwe lawo onke amaNgqina KaYehova aseKazakhstan abanjelwe ukholo lwawo, cofa le linki ingezantsi.
Abanjelwe Ukholo Lwawo—EKazakhstan (PDF)
NgoMatshi 13, 2017
Ityala lisiwa enkundleni.
NgoMatshi 1, 2017
Isicelo sokuba amatyala achithwe siyakhatywa.
NgoFebruwari 20, 2017
Isicelo sokuba amatyala achithwe sifakwa enkundleni.
NgoJanuwari 30, 2017
INkundla Yesixeko SaseAstana ikhaba isibheno.
NgoJanuwari 18, 2017
UTeymur Akhmedov uyabanjwa aze agwetywe ukuhlala entolongweni iinyanga ezimbini elinde ukuxoxwa kwetyala lakhe.